एसईईको रिजल्ट सार्वजनिक, नतिजा कसरी हेर्ने ?(तरिकासहित) - Sainokhabar
होमपेज / शिक्षा / एसईईको रिजल्ट सार्वजनिक, नतिजा कसरी हेर्ने ?(तरिकासहित)
एसईईको रिजल्ट सार्वजनिक, नतिजा कसरी हेर्ने ?(तरिकासहित)
बिहिबार, असार १२, २०७६ , साइनो खबर
भक्तपुर । ४ लाख ७५ हजार तीन परीक्षार्थी सहभागी भएको एसईई परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक भएको छ । यसवर्ष सामुदायिक विद्यालयबाट ३ लाख ४० हजार १ सय ९६ र निजीबाट १ लाख ३४ हजार ८ सय ७ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए ।
परीक्षामा ३.६ देखि ४ जीपीएसम्म ल्याउने १७ हजार ५ सय ८० जना, ३.२ देखि ३.६ जीपीएसम्म ल्याउने ५१ हजार १ सय ३७ जना, २.८ देखि ३.२ जीपीएसम्म ल्याउने ६३ हजार ७ सय ४१ जना, २ देखि २.४ जीपीएसम्म ९८ हजार २ सय ७ जना रहेका छन् । त्यस्तै १.६ देखि २ जीपीएसम्म ल्याउने ९५ हजार ३ सय ७ जना, १.२ जीपीएदेखि १.६ जीपीएसम्म ल्याउने परीक्षर्थीको संख्या ४३ हजार ८ सय ४१ जना रहेका छन् । ५ सय रुपैयाँ तिरेर नतिजा चित्त नबुझेमा प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र निवेदन दिन सकिने परीक्षा नियन्त्रक विष्णुप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । दुई विषयसम्म सी वा सी भन्दा तलको ग्रेड आएमा पूरक ग्रेडवृद्धि परीक्षामा सहभागी हुन बताइएको छ ।
यस वर्षको एसईई परीक्षामा नियमितर्फ सबैभन्दा धेरै प्रदेश ३ बाट १ लाख ३ हजार ४ सय ६० विद्यार्थी सहभागी थिए ।् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट ३२ हजार ३ सय ४४ परीक्षार्थी छन् । प्रदेश १ बाट ७९ हजार ७ सय १९, प्रदेश २ बाट ६४ हजार ८ सय ६८, गण्डकी प्रदेशबाट ४६ हजार ५ सय ७१ परीक्षार्थी छन् । त्यसैगरी प्रदेश ५ बाट ७३ हजार २ सय ८५ र प्रदेश ७ बाट ४९ हजार ९ सय ३९ ले परीक्षा दिएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा एसईई दिने विद्यार्थीको संख्या यो वर्ष घटेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल ४ लाख ८५ हजार ५ सय ८६ परीक्षार्थी रहेकामा यस वर्ष करिब १० हजार कम सहभागी भएका थिए । २०७५ साल चैत १० गतेदेखि सञ्चालन गरिएको थियो ।
नेपाल टेलिकमबाट एसएमएस र आईभीआर प्रयोग गर्दै १६०० सर्टकोड बाट नतिजा हेर्न सकिन्छ । एनसेलबाट एसएमएस प्रयोग गर्दै १६०० सर्टकोडबाट पनि मज्जाले नतिजा हेर्न सकिन्छ । एनसेल, नेपाल टेलिकमसहित ६ वटा फर्म/संस्थाबाट नतिजा हेर्न सकिने परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० सानोठिमी, भक्तपुरले बताएको छ ।
त्यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारको वेवसाइट www.moest.gov.np शिक्षा तथा मानब स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमीको वेवसाइट www.boe.gov.np परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० को वेवसाइट www.see.gov.npलगायत ११ वेवसाइबाट पनि सूचना पाउन सकिन्छ ।